(၇၅)နှစ်မြောက် ဗီယက်နမ် ပြည်သူ့တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်နှင့် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၏ (၃ဝ) နှစ်မြောက် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပ | cincds
(၇၅)နှစ်မြောက် ဗီယက်နမ် ပြည်သူ့တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်နှင့် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ၏ (၃ဝ) နှစ်မြောက် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပ
ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ
(၇၅)နှစ်မြောက်ဗီယက်နမ်ပြည်သူ့တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်နှင့် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ (၃ဝ)နှစ် မြောက် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Melia Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြား သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် စစ်သံမှူးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြသည်
ဦးစွာ ဧည့်ခံပွဲသို့ တက်ရောက် လာကြသော ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ဧည့် သည် တော်များအား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ် သံအမတ်ကြီး H.E. Dr.Luan Thuy Duong၊ စစ်သံမှူး Senior Colonel Nguyen Thanh Dong နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနောင်၊ ဗီယက်နမ် သံအမတ်ကြီးနှင့် စစ်သံမှူးတို့သည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် သီချင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သီချင်းတို့ဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအလံကို အလေးပြုကြပြီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ စစ်သံ မှူး Senior Colonel Nguyen Thanh Dong နှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်တို့က နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြော ကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်၊ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီးနှင့်စစ်သံမှူးတို့သည် ဗီယက်နမ် ပြည်သူ့ တပ်မတော် သမိုင်း ဗီဒီယိုအားကြည့်ရှုကြပြီး ဧည့်သည်တော်များ နှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ယင်းနောက် သံအမတ်ကြီးနှင့် စစ်သံမှူးတို့သည် အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသူများအား ဂုဏ်ပြုညစာ ဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(၇၅)နှဈမွောကျ ဗီယကျနမျ ပွညျသူ့တပျမတျောနေ့ အထိမျးအမှတျနှငျ့ ဗီယကျနမျ ဆိုရှယျလဈ သမ်မတနိုငျငံ၏ (၃ဝ) နှဈမွောကျ အမြိုးသား ကာကှယျရေးနေ့ အထိမျးအမှတျ ဧညျ့ခံပှဲ ကငျြးပ
ရနျကုနျ ဒီဇငျဘာ ၁ဝ
(၇၅)နှဈမွောကျဗီယကျနမျပွညျသူ့တပျမတျောနေ့ အထိမျးအမှတျနှငျ့ ဗီယကျနမျဆိုရှယျလဈသမ်မတနိုငျငံ၏ (၃ဝ)နှဈ မွောကျ အမြိုးသား ကာကှယျရေးနေ့ အထိမျးအမှတျ ဧညျ့ခံပှဲ အခမျးအနားကို ယနညေ့ပိုငျးတှငျ ရနျကုနျမွို့ရှိ Melia Hotel ၌ ကငျြးပပွုလုပျရာ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး မငျးနောငျ၊ ရနျကုနျတိုငျး စဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး ဗိုလျခြုပျ သကျပုံနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ ရနျကုနျမွို့ရှိ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ နိုငျငံခွား သံရုံးမြားမှ သံအမတျကွီးမြားနှငျ့ စဈသံမှူးမြား၊ ဖိတျကွားထားသူမြား တကျရောကျကွသညျ
ဦးစှာ ဧညျ့ခံပှဲသို့ တကျရောကျ လာကွသော ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး မငျးနောငျနှငျ့ တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ ဧညျ့ သညျ တျောမြားအား မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျ သံအမတျကွီး H.E. Dr.Luan Thuy Duong၊ စဈသံမှူး Senior Colonel Nguyen Thanh Dong နှငျ့ တာဝနျရှိသူတို့က ကွိုဆို နှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီးမငျးနောငျ၊ ဗီယကျနမျ သံအမတျကွီးနှငျ့ စဈသံမှူးတို့သညျ ပွညျထောငျစု သမ်မတမွနျမာ နိုငျငံတျော သီခငျြးနှငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ သီခငျြးတို့ဖွငျ့ နှဈနိုငျငံအလံကို အလေးပွုကွပွီး ဗီယကျနမျနိုငျငံ စဈသံ မှူး Senior Colonel Nguyen Thanh Dong နှငျ့ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး မငျးနောငျတို့က နှုတျခှနျးဆကျစကား ပွော ကွားသညျ။
ဆကျလကျ၍ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး မငျးနောငျ၊ ဗီယကျနမျသံအမတျကွီးနှငျ့စဈသံမှူးတို့သညျ ဗီယကျနမျ ပွညျသူ့ တပျမတျော သမိုငျး ဗီဒီယိုအားကွညျ့ရှုကွပွီး ဧညျ့သညျတျောမြား နှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
ယငျးနောကျ သံအမတျကွီးနှငျ့ စဈသံမှူးတို့သညျ အခမျးအနား တကျရောကျလာကွသူမြားအား ဂုဏျပွုညစာ ဖွငျ့ တညျခငျး ဧညျ့ခံခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။